महागुरु फाल्गुनन्दको उपदेशको गहँनतालाई बुझ्न सकौं - Mangsebung News
होमपेज / मुख्य समाचार / महागुरु फाल्गुनन्दको उपदेशको गहँनतालाई बुझ्न सकौं
महागुरु फाल्गुनन्दको उपदेशको गहँनतालाई बुझ्न सकौं
शनिबार, पुष २५, २०७७	रमेश तुम्बापो ‘हाङसाम’
महागुरु फाल्गुनन्दको एक मात्र उद्देश्य मानव समाजमा सत्यका सामाज्य स्थापना गर्नु थियो भन्ने कुरा उहाँको सिवाखाहुन, उपदेश तथा उनका जीवनकालमा घटेका घट्नाहरुको अध्ययन्बाट स्पष्ट हुन्छ । वि. स. १९८८ साल बैशाख २४ गतेको वृहत किरात चुम्लुङ भन्दा पनि अझ् वृहत चुम्लुङ सोही सालको मंसिर महिनाको २४ गते बुधबारको दिन सोही स्थान (लब्रेकुटी) मा नै सम्पन्न भएको थियो ।
उक्त चुम्लुङमा चारखोला, पान्थर, छथर, फेदाप मेयङलुङ, ताप्लेजुङबाट जम्मा ९२ जनाले सहभागिता जनाएको थियो । यो चुम्लुङमा लिम्बू जाति इतर पान्थर रविका राई जातिका साधु सन्तहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । यो ऐतिहासिक चुम्लुङको ८ महिना अगाडि निर्माण भएको सत्यधर्म मुचुल्काको बुँदाहरुलाई नै टेकेर थप परिमार्जनको प्रयास गरेको थियो । चुम्लुङ समापन भएपछि साँझ आफ्ना प्रतिष्ठित चेला पान्थर यासोक भदौरेका सुब्बा शेरबहादुर लावती र फेदाप मेयङलुङका सुब्बा काजीमान तुम्बाहाङफेहरुलाई नाम तोकेर यसरी प्रश्न गर्नु भएको थियो । ए… शेरबहादुर, काजीमान ! म को हुँ ? म के चाहान्छु ? म किन आएँ ? महागुरुको यस्तो प्रश्नको उत्तर तत्काल दिन नसकेपछि भोलिमात्र भन्छौं गुरु भनि शेरबहादुर र काजीमानले विन्ति गरे । चेलाहरुको बिन्ति सुनेपछि ए…. सपनामा विचार गर्छौं त ? भनेर महागुरु हाँस्नु भयो । रातभर चेलाहरुको ठूलो समूहमा यस विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष छलफल भयो तर निष्कर्ष आएनन् ।
अन्ततः सुब्बा शेरबहादुर र काजीमान दुई जना मात्र बसेर गम्भिर छलफल भयो । विहान उज्यालो भयो । पुनः महागुरुले प्रश्न गर्नु भयो । सपनामा के पायौ त ? दुवै जनाले हात जोडेर एकै स्वरमा भने–गुरु ! हजुर सत्य बोल्ने, सत्य कर्म गर्ने, सत्य भोजन गर्ने, सत्य आहार, विहार गर्ने हुनाले हामीले तपाईलाई निस्सेहाङमा अर्थातः सत्यहाङमा भनेर चिन्छौं । म के चाहान्छु त ? सत्कर्म गर्न, गराउँन चाहानुहुन्छ । त्यसो भए म के गर्न आए त ? संसारको असत, (पाप) कर्म हरण गरी सत्य धर्मको राज्य महिमा फैल्याउन आउँनु भएको हो । त्यसो हो भने, आजदेखि तिमीहरु सत्यको मार्गमा हिड्छौ त ।
हिड्छौं गुरु उपरोक्त गुरुचेलाबीचको सवाल जवाफले महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म अवतरण किन र के का लागि भन्ने कुरो स्वत स्पष्ट हुन्छ । वि. स. १९९४ सालमा फक्ताङलुङको फेदी चोगम्बा भन्ने स्थानमा एउटा धर्मशाला भवनका साथै पारुङमारुङ माङहिम निर्माण गर्नु भएको थियो । उक्त धर्मशाला भवन निर्माणका लागि तत्कालीन राजगुरु पण्डित दिपराज उपाध्यले पनि रु. १००÷– एक सय रुपैयाँ पठाउनु भएको थियो । तर राजगुरुले पठाएको १००÷– मध्ये रु. २०÷– मात्र खर्च गरी बाँकी ८०÷– रुपैयाँ फिर्ता गरी पठाउनु भयो । यस घट्नाले वहाँको महान निस्वार्थ भावना र आर्थिक मोह सून्यतालाई स्पष्ट पारेको छ । श्रद्धेय गुरुको यस्तो व्यवहारले पाए भन्दैमा आवश्यकता भन्दा बढी लोभ नगर भन्ने सन्देश दिएको स्पष्ट हुन्छ ।
उदाहारणको लागि उनै महागुरु फाल्गुनन्दका विचार दर्शन बोक्ने संघ–संस्थाका उपल्लो तहका नेतृत्वले कुनै योजना सम्पन्न गर्न कुनै पनि व्यक्ति, संस्थाहरुबाट रु एक लाख प्राप्त गर्छ र विस हजार प्रयोग गर्दा योजना सम्पन्न हुन्छ भने बाँकी असी हजार रुपैयाँ के गर्छ होला । सबैले एकै स्वरमा बिना संकोच भन्न सक्छ घर बनाउँछ, गाडी किन्छ, आम महागुरुका अनुयायीहरु यस्तो स्थितिको अन्त्य होस भन्न चाहान्छु । महागुरु फाल्गुनन्दको त्यस्तो आदर्शयुक्त व्यवहारबाट नेतृत्वले केही पनि सिक्नु पर्दैन ? सत्यको साम्राज्य स्थापना गर्न महागुरु फाल्गुनन्द नेपाल, भारत, भूटानको कुना कन्दरासम्म चप्पलसम्म नटेकी खाली खुट्टा टेक्दै अहोरात्र खट्नु भयो ।
उनको समयमा इतिहासकै कुरुप क्रुर निरंकुश राणा शासन व्यवस्था कायम थियो । जतिबेला कानुनत मृत्युदण्डको व्यवस्था यिथो । त्यस्तो अवस्थमा ५÷५ पटकसम्म पक्राउ पर्नु भयो । वि. स. १९९३ सालमा ३ जना राजगुरुहरुको नेतृत्वमा २१ जनाको टोली महागुरु फाल्गुनन्दलाई पक्राउ गर्ने उद्देश्यले ताप्लेजुङ जिल्लाको काबेलीमा आई पुग्यो । तिनीहरुले ५ दिनसम्म महागुरुको गतिविधिहरु गोप्य रुपमा अध्ययन गरेपछि महागुरुलाई निर्दोष ठहर गरेर पक्राऊ नगरी त्यसै फर्किने निधो गर्दा समेत महागुरु आफैले मलाई नलगि जानु भयो भने तपाई राजगुरुहरुलाई पनि श्री ३ र श्री ५ ले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।
त्यसकारण मलाई लगेर जानुहोस । श्री ३ र ५ लाई उहीँ पुगेर चित्त बुझाई दिनेछु भनि जेल जान आफै तयार हुने कति निर्भिक र कति महान सोचका प्रतिमुर्ति हुनुहुन्थ्यो होला महागुरु ! अरुलाई परेको अप्ठ्यारो आफ्नै अप्ठ्यारो ठानेर काबेलीदेखि काठमाण्डौसम्म खाली खुट्टा हिडेरै जान तयार हुने । कति उच्चकोटिको मानवीय व्यवहारको नमूना थियो त्यो । काबेलीदेखि काठमाण्डौ, काठमाण्डौदेखि काबेलीसम्म ओहोरदोहोर खाली खुट्टा पैदल गर्दा कति दिन वितेको थियो होला ! आफ्ना श्रद्धेय गुरुबाट प्रदर्शित यी व्यवहारबाट नेतृत्वमा आसिन व्यक्तित्वहरुले धेरै कुरा सिक्नु आवश्यक छ ।
आज एउटा समाजको हिस्साले महागुरु फाल्गुनन्दलाई सानो लगानीमा ठूलो मुनाफा दिने उद्योगको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । उसलाई महागुरुको तस्वीर कसले कहिले कहाँ खिचेको थियो भन्ने कुरा थाहा पत्तो केही नभए पनि यसबाट उसले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ प्राप्त गर्दै आएको छ । यी त सबै भौतिक बस्तुहरु हुन् । जो नाशवान छन् । प्राप्तीको लागि शुल्क पनि तिर्नुपर्छ । तर यी भौतिक बस्तुहरु भन्दा कैयौ गुणाले मुल्यवान उहाँका सिवाखाहुन उपदेश निःशुल्क प्राप्त भए पनि त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यसबाट अविनाशी आत्मिक लाभ लिने तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिन्दैन । यो आफैमा सोचनीय स्थिति हो । यसको मूल कारण नेतृत्वले महागुरुको महानता र गहँनतालाई बोध गर्न र गराउँन नसक्नु हो । एउटा परमार्थ सत्य कुरा के पनि हो भने, महागुरु फाल्गुनन्दका अनुयायी वृत्तमा अरुको आफ्नै साथीको शिकायत गरेर आफू हितैसी बन्ने शिकायतको व्यापार निकै फस्टाएर गएको छ । यसले स्वयम महागुरु फाल्गुनन्दको ुआजदेखि तिमीहरुलाई एउटै भाँडामा पाकेको भान्सा खाने एउटै परिवार बनाएँ है भन्नु भएको उपदेशको उपहास गरेको छ । शिकायत गर्ने प्रवृत्तिले मानव–मानवलाई जोड्ने प्रेम र सद्भावको बन्धनलाई चुडाल्ने काम गर्छ । यसबाट एकतामा धोका पुग्न जान्छ यो अर्को सोचनीय विषय हो । सत्य निष्ठाको प्रतीक निधारमा सेतो टिका, गालामा अध्याधिक साधनाको प्रतिक जपमाला अनि छातिभरी महापुरुषहरुको तस्वीर चित्राङ्कित लकेट टाँसेर कसैको सिकायत गर्नु आफैमा सुहाउँदिलो कुरा हुन सक्दैन । हुन त जुन बस्तुले बजारमा मूल्य पाउँछ, व्यापारीहरु त्यसैको खरिद विक्रीमा लाग्नु स्वभाविकै हो ।
तर महागुरुका अनुयायीहरु सत्यको साधक बन्नु पर्छ । शिकायतका व्यापारी बन्नु हँुदैन । यसले संगठनको जीवनमा नोक्सान बाहेक अरु केही परिणाम दिन सक्दैन । महागुरुको उपदेशले केही कतै कसैको शिकायत गर्ने अनुमति दिएको छैन् । हामी कहाँ अर्को विचारणीय पन्त के छ भने–हामीसँग दुनियाँको कमी कमजोरी देख्ने आँखा मात्र खुलेको छ । आफ्नै कमी कमजोरी देख्ने आँखा अद्यपि खुल्न सकेको छैन् । त्यसैकारण अरुको जीऊमा हिडेको जुम्रा देख्यौं, आफ्नो जिऊमा हात्ति हिडेको पनि देखेनौं । अब आन्तरिक आँखा खोलेर आफैले आफूलाई हेर्न ढिलो गर्नु हुन्न । किनकि आफूले आफैलाई नबुझी अरुलाई कदापि बुझ्न सकिन्न । आफूले आफैलाई नहेरी अरुलाई चिन्न पनि सकिन्न । विचारणीय विषय यो पनि छ कि, हामीलाई आफैमा अरु कसैको आचरण, व्यवहार, स्वभाव प्रति टिकाटिप्पणी गर्नमा माहिर छौं । तर, आफ्नो आचरण व्यवहार प्रति कसैले टिप्पणी ग¥यो भने हाम्रा लागि त्यो सह्य हुन सक्दैन । यस्ता प्रवृत्तिहरुले सांगठनिक जीवनलाई बलियो बनाउँनको सट्टा दुर्बल नै बनाउँनेछ, भइरहेको यथार्थ पनि यहीँ नै हो । यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई त्याग वा सुधार नगर्ने हो भने, हाम्रो साझा यात्रा अतिवाद, अन्धबाद हुँदै बर्वाद तिर मोडिन्दैन भन्न सकिन्दैन । भगवान बुद्धले भन्नु भएको छ, आँखा नभएको अन्धाले सही गन्तव्यमा पु¥याउँदैन ।
महागुरु फाल्गुन्दले संसार परिवर्तन गर्ने मुलत ३ वटा अश्त्रहरु दिनु भएको छ । १. सत्य, २. अहिंसा, ३. माङसेवा । यी अश्त्रहरु कुशलतापूर्वक चलाउने क्षमता राख्यौ भने सत्यको साम्राज्य स्थापना गर्न सक्छौं भन्ने उहाँको उपदेशको सार हो । उनको उपदेशले भन्ने गर्छ सत्यको साम्राप्य वाह्य लोकमा भन्दा पहिला तिमी आफै भित्र स्थापना गर र सत्यलाई शासन गर्न देऊ । के हामी सत्यद्धारा शासित हुन तयार छौं । तिनै महागुरुको विचार दर्शन बोक्ने संघ संस्थाहरुको नेतृत्व वर्ग नै लोभ, मोह, स्थार्थ, अहंकारबाट शासित भइरहेको घाम जतिकै छर्लङ देखिन्दै छ भने, सर्वसाधारण भक्तहरुको अवस्थ के होला । अहिंसाको परिभाषा र व्याख्या केवल काटमार गर्नमा मात्र सिमित छैन, चोरी, ठगी, जालझेल, छलपकट, ढाउपेच, षडयन्त्र, भ्रष्टचार, व्याभिचार, अहंकार आदि सबै हिंसात्मक कार्यहरु हुन् । त्यसैगरी माङसेवाको परिभाषा र व्याख्या पनि व्यापक छ । बेसाहारा, अनाथ, दीन दुःखी, गरिब अन्यायमा परेकाहरुलाई साथ सहयोग गर्नु देखि निस्वार्थ भावले जपतप, ध्यान, तपस्या, पूजापाठ गर्नु माङसेवा हो ।
माङसेवाले समाजमा प्रेम, सदभावको भावना जागृत गर्छ । मुन्धुममा यसैलाई माङलाक पोक्मा भन्ने गरिन्छ । पराईको सेवाबाट आफूलाई शान्त र आनन्द प्राप्त हुन्छ भने यसले अहिंसालाई महत्वपूर्ण बल प्रदान गर्छ । हाम्रो अग्रज नेतृत्वमा आसिन व्यक्तित्वहरुले महागुरुले देखाउनु भएको यी सुन्दर लोक कल्याणकारी बाटोहरु पहिलाउँन ढिलाई गर्नु हुन्न । सत्यको राज्यमा न त संविधान कानुन न त प्रहरी प्रशासन । न त अड्डा अदालत । सबै सत्तवादी भएपछि झै झगडा, मनमुटाव, चोरी, ठगी, षडयन्त्र, भ्रष्टचार, व्याभिचार, अपराधिको घट्नाहरु सुन्य नभए पनि न्युन भएर जान्छ । तसर्थ यी शीर्षकमा हुने खर्चलाई नविनतम खोज अन्वेषण तथा विकासमा प्रयोग ग¥यो भने संसारले सहजै मुहार फेर्न सक्छ । महागुरु फाल्गुनन्दको विचार दर्शनले यहीँ कुरालाई स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
(लेखक मङसेबुङ मासिकका स्तम्भकार हुन्/प्रस्तुत लेख माङसेबुङ मासिकको पुस अंकमा प्रकाशित लेख हो)